အလင်းသစ်နေ့စွဲများ: ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ (တဂ်ပို့စ်)
အိပ်ယာကနေ နိုးပြီဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ညာဘက်ကို တစောင်းလှည့်ပြီး တစ်ခါကွေးပါတယ်။။ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကို တစောင်းလှည့်ပြီး တစ်ခါကွေး ပါတယ်။။ ပြီးရင် မှောက်ရက် ခဏမှေးပါတယ်။။ (အဖွားရှိတုန်းကဆို ချစ်လှစွာသော မြေးကို အကြင်နာထားပြီး ပြောပုံများ "သေတောင် မသေသေးဘူး ငရဲပြည်ကို မျှော်နေတာလားဟဲ့" တဲ့။။ မှောက်ရက်အိပ်တာကို အဖွားက မကြိုက်ဘူးလေ..:P:P)။။ နောက်ဆုံးမှ မထရင် နောက်ကျတော့မယ်ဆိုတာ သိလို့အိပ်ယာက အတင်း ကုန်းရုန်းပြီး ထပါတယ်။။ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ ကိုယ်၊လက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါတယ်။။
မုန့်ဟင်းခါး၊ ဒါမှမဟုတ် ကျစိမ့်ကျကျလေးနဲ့ အီကြာကွေး။။
♥ လောလောဆယ်နေ့တိုင်းစားဖြစ်နေတဲ့ မနက်စာ
ကော်ဖီဝမ်း၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဝမ်း (သို့) ကော်ဖီဝမ်း ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ် သရီး။။ (ဟီးဟီး..ငယ်ငယ်တုန်း ကတော့ ထမင်းကြော်နဲ့ ပဲပြုတ်၊ ကျောင်းမှာတုန်း ကတော့ ထမင်းကြော်တစ်ခွက် ၊လ္ဘက်ရည်တစ်ခွက်၊ ကြက်ဥတစ်လုံး။။ "ခုတော့လည်း ဒါတွေ..ဒါတွေ.. ပြီးခဲ့ပါပြီ..ပြီးခဲ့ပါပြီ.. ဒါပေမယ့်လည်း ..တရံတခါမှာတော့ သတိရနေပါသည်.." သီချင်းစာသားတွေ မှန်မယ်တော့ ထင်တာပါပဲ.. :D:D)။။
♥ နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ
ကိုယ်တိုင်သာ မချက်ရဘူးဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ စားရ၊စားရ ကြိုက်ပါတယ်။။
ငါးစင်းကော (စပါးလင်လေး နိုင်နိုင်နဲ့ ငရုပ်သီး စပ်စပ်လေး.. အောင်မငီး သွားရည်ပါ ကျ..ကျ.. ဟာ..ပေကုန်ပါပြီ...:P :P)။။
အတန်းချိန် တစ်နေကုန် ဆိုရင်တော့ နေ့လည်စာကို ကျောင်းမှာစားရလို့ တစ်ခွက်သောက် ပါတယ်။။ ဒိပြင်တော့ မသောက်ဖြစ်ပါဘူး။။
♥ ညနေစာကို ဘယ်မှာစားတတ်ပါလဲ
အဆောင်မှာပဲ စားပါတယ်။။ (မြန်မာမှာတုန်းကလည်း လူပျိုရိပ်သာမှာပဲ စားပါတယ်.. ကြုံတုန်းလေး လူပျိုဆိုတာ ကြွားလိုက်တာ..ဟီးးးးးးးး)။။
မိန်းမများရသွားရင် ငါဒီလို နားအေးပါးအေး စားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့.. :P :P။။
♥ အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန်မှာခံစားချက်
ဒီနေ့အတွက်တော့ လွတ်ပဟ၊ ကျွတ်ပဟလို့။။ (ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် စာသင်ချိန်တွေက အရမ်းကိုဖိစီးလွန်းပါတယ်။။ :( တော်တော်လေးကို အာရုံစိုက်ထားရတော့ ပင်ပန်းတယ်လေ။။ )
♥ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ဘာအရင်လုပ်တတ်သလဲ
မျက်စိတစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ စားစရာတစ်ခုခုကို ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့်ရင်း..အင်းးး.. ကွန်ပျူတာ ဖွင့်ပါတယ်။။
♥ ညမအိပ်ခင် ကော်ဖီသောက်တတ်ပါသလား
ကိုယ်တိုင်သာ မဖျော်ရလို့ကတော့လား ဘာပြောကောင်းမလဲ အချိန်တိုင်း သောက်တတ် ပါတယ်.. (ဟီးးးး ကော်ဖီတစ်ခါ သောက်ဖို့က ရေနွေးတည်ရ ခွက်ပြင်ရနဲ့ တော်တော် လာဘ်ဝင်တာကိုးဗျနော။။ ဒါကြောင့် အထုပ်(၅၀)ထုပ် တစ်ထုပ်ဆိုရင် တစ်လသောက် လို့ရပါတယ်။။ အဖျော်ပျင်းလို့လေ။။)
♥ ညအိပ်ယာထဲ ဝင်ဝင်ခြင်းအချိန် ဘာအရင်ဆုံးလုပ်ပါသလဲ
ဘုရားရှိခိုးပြီးလို့ အိပ်ယာထဲ ဝင်တာနဲ့ စောင်အရင်ခြုံပါတယ်။။ (နွေဘက် ဘယ်လောက်ပဲ ပူအိုက်နေပါစေ စောင်မခြုံရရင် မအိပ်တတ်ပါဘူး။။ စိတ်ထဲ တစ်ခုခုလိုနေသလို ခံစားရလို့လေ..ဟီးးး)။။
♥ အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေမှာ ဘာလုပ်သလဲ
အဲဒါ ဘယ်လိုညမျိုးလဲဟမ်.. :P :P ။။
♥ တအားစိတ်ဓါတ်ကျ လာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ
ငါလုပ်လို့ မဖြစ်ခဲ့တာ ဘာရှိဖူးလဲလို့ အရင်တုန်းက အောင်မြင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးပါတယ်။။
♥ အပြင်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်း သတိထားပြီး ယူတတ်တဲ့ပစ္စည်း
ရဲကွင်းဂါထာများ (ပတ်စ်ပို့၊ကျောင်းသားကဒ်၊အဆောင်ကဒ်)၊ အခန်းသော့၊ ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံအိတ်။။ (အမှန်တော့ လွယ်အိတ်ကို ကောက်လွယ်ပြီး ထွက်လာတာပါ။။ ကျောင်းသွားသွား၊ အပြင်သွားသွား အဲဒီအိတ်ပဲ သုံးတာမို့လေ။။ :P)
ညီမလေး။။ (အမေနဲ့တူလို့.. :) )
အကြွင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဒူးတောင် ကိုယ်မယုံပါဘူး။။
♥ အလုပ်ထဲမှာ ကိုယ်အခင်ဆုံးသူ
Supervisor တူတဲ့ သူငယ်ချင်း။။
♥ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ပစ္စည်းလေးတခု
အခုသုံးနေတဲ့ LAPTOP လေ။။ (သူက ကျေးဇူးရှင်လေ..သိတယ်မလား သူမရှိရင် လစ်ပြီပဲ...:D)
♥ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ အထဲကအကြိုက်ဆုံး ပစ္စည်းလေးတခု
လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုတောင် သိပ်မနှစ်သက်ဘူးဗျ။။
♥ ကိုယ့်ပတ်သက်ဖူးတဲ့ သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဆုံးသူ
ကိုယ်အိပ်ထဲမှာ သုံးစရာပြတ်တော့ ခုံဖိနပ်ကြီးချွတ်ကာ ဒါကြည့်ထားလို့ ပြောတဲ့မင်းလို ကိုယ့်ဘက်သူတို့ လှည့်မကြည့်ကြ ပါလားကွယ်.. နေထိုင်မကောင်းလို့ အိပ်ယာထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေ... သေပြီလားလို့ ကိုယ့်အပေါ်မင်းလို ဘယ်သူမှ ခုထိမမေးးးးးဘူးးးးးးး.. မင်းလောက်ကိုယ့်ပေါ် ဘယ်သူမှ မဆိုးဘူး.. မင်းတစ်ယောက် တည်းသာ ကိုယ့်တွက် အဆိုးနိုင်ဆုံးးးးး ။။ (သီချင်းဆိုတာပါ ခင်ဗျ.. :P:P)
♥ အခုလောလောဆယ် အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ
အိမ်ပြန်ချင်တယ်။။ (မီးပျက်ရင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနေမယ်။။ အင်တာနက်မရရင် စာအုပ်ဖတ်နေမယ်။။ ဓာတ်လှေကား မရှိရင် ခြေလျင်တက်မယ်။။ မြေအောက် ရထားမရှိရင် မြင်းရထားစီးမယ်။။ နှစ်ထပ်ကားမရှိရင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် စီးမယ်။။ ချောကလက် မရှိရင် ထန်းလျက်ခဲစားမယ်။။ ဘော့ဒ်ဂါမရရင် ဝီစကီချမယ် (လှည်းကူးမှာ Grand Royal စက်ရုံကြီးမှ ဟီးးးလို့)။။) တော်ပါပြီဗျာ မြန်မာပြည်ကိုပဲ လွမ်းလှပါပြီ.. ကိုယ်တွေက အာလူးစားသူများမှ မဟုတ်တာ ထမင်းစားသူများမို့ ဘယ်အချိန်မေးမေး အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒကတော့ မြန်မာပြည် ပြန်ချင်တာပါပဲ။။။
ကဲ.. မေးခွန်းအားလုံးကိုတော့ ဖြေလို့ပြီးပါပြီ။။ တဂ်လိုက်တဲ့ ညီလေး မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)ရော၊ တဂ်ပို့စ်ကို စလိုက်တဲ့ အမတော် BLACKROSE ရော ကျေနပ်နိုင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။။ ကျွန်တော့် တဂ်ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မောင်နှမအများလည်း ပုံဖော်ကြည့်နိုင်ကြပါစေ။။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်သော၊ ကျွန်တော့်ကို မချစ်သော၊ ကျွန်တော့်ကို သိသော၊ ကျွန်တော့်ကို မသိသော၊ ကျွန်တော့်ကို မုန်းသော သူများအားလုံး(အားလုံး) စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ထာဝရထက် တစ်ရက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေဗျာ။။။
Posted by အလင်းသစ် at 9:37 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 8, 2012 at 9:49 PM
တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး.....အင်း....လို့ပဲ ပြောတော့မယ် ...
စောင်မခြုံ ရရင် ..... တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ ဆိုလို့ တွေးမိသွားတယ် ....:P:P:P
ပြန်...ပြန်..ပြန်... အဟဲ.. စာဖတ်ရင်း.... သီချင်းဆိုတာပါ စိတ်မရှိပါနဲ့ လူကြိးမင်းရှင့်....:):)
အမှတ်တရ နေ့စွဲများ.... January 9, 2012 at 12:55 AM
လမင်းငယ် January 9, 2012 at 1:20 AM
အလင်းသစ်ရေ တနေ့တာတဂ်လေးဖတ် ဖတ်ပြီ
ငါးစင်းကော (စပါးလင်လေး နိုင်နိုင်နဲ့ ငရုပ်သီး စပ်စပ်လေး.. စားချင်
စိတ်ဖြစ်မိသွားလို့ ကျသွားပါတယ် :P
san htun January 9, 2012 at 2:32 AM
မဒမ်ကိုး January 9, 2012 at 3:50 AM
စောင်မခြုံရင်မအိပ်တတ်တဲ့သူဟာ အိပ်ရင် ဖင်မလုံလို့း)
chocolatecupidlay January 9, 2012 at 6:16 AM
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) January 9, 2012 at 7:17 AM
ရေးတတ်ပ ဒို့ လူကြီးကတော့ ဖတ်သွားပြီဗျု့ 
ဘိုဖြူ January 9, 2012 at 12:14 PM
လရိပ်အိမ် January 9, 2012 at 12:36 PM
ထပ်တူထပ်မျှဘဲ ၊ မြန်မာပြည်ကိုဘဲလွမ်းသွားတယ်
Candy January 9, 2012 at 5:02 PM
တဂ်ပိုစ့်ဖတ်သွားတယ်ဗျို့.... ကန်ဒီနဲ့တူတာက စောင်ခြုံတဲ့ဟာ.. ဟီး
ကန်ဒီလည်း စောင်ခြုံမှ လုံခြုံသလိုခံစားရတယ် :P :P
မိုးငွေ့...... January 9, 2012 at 6:55 PM
နောက်ဆုံးမေးခွန်းက အဖြေတူသူတွေ သိပ်များတယ်ကွယ်....။
ကိုဇော် January 9, 2012 at 11:40 PM
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ မိန်းမယူလာတော့ ရပ်ကွက်ကို စောင်တစ်ထည် ဝယ်လာခဲ့တယ်လို့ ကြွားသတဲ့။ အင်း . . စောင်မခြုံရင် မအိပ်တတ်ဘူး ဆိုတော့ . . .ဆိုတော့ကာ . .အင်း . . .
mstint January 11, 2012 at 7:06 AM
စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်နေ့တာတဂ်ပို့စ်လေးဖတ်သွားတယ် အလင်းသစ်ရေ။
မြသွေးနီ January 11, 2012 at 11:20 AM
အင်း...စောင်မခြုံပဲ မအိပ်တတ်တာ သွားတူတယ်..။
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫ January 12, 2012 at 9:35 AM
အနာဂါတ်ကောင်းကင် January 12, 2012 at 4:30 PM